Yemahara software yedambudziko. Mazuva eredhiyo uye emergency | Linux Vakapindwa muropa
Mauri Nyaya yapfuura isu takanga tatanga kuongorora mamwe mamiriro ekuti kushandiswa kwemahara uye yakavhurika sosi software (FOSS) inogona kubatsira mukuwana nekugadzirisa ruzivo. Zvino taona maitiro ekuita kuti iyo ruzivo isvike kune vagari.
Makore mashoma apfuura, nhepfenyuro muUnited States dzakabvunza mutongi kuti ave kuiswa kweanogamuchira FM mune yega smartphone kunosungirwa. Kunyangwe vaongorori vazhinji vaifungira kuti yaive nzira yekudzora kurasikirwa pamusika pamaoko eSptify neTunes, chikonzero ndechekuti redhiyo ndiyo yaive sisitimu yakanakisa yekutumira yambiro nezve emergency.
Vanopa uye mafekitori ekupedzisira akavimbisa kuti vaive nehurongwa hwakabatana hwekuzivisa, uyezve, vakaita bvunzo gore rakapera apo shongwe dzemasero dzakatapurirana kwehafu yeawa, unotevera meseji yekuyedza muChirungu neSpanish
IYI NDIYO MUedzo WENYIKA YEMAHARA EMERGENCY ALERT SYSTEM. Hapana chiito chinodiwa.
Ini pachangu, ndiri kutsigira kuiswa kweye FM inogamuchira. Musi waJune 16 wegore rapfuura, dzakateedzana sarudzo dzakaipa dzakasiya iyo yeArgentina Republic isina magetsi kwemaawa akati wandei. Avo avo vasina kutora chenjedzo yekuchaja nharembozha (uye vasina kuchengeta mawairesi nemagetsi emagetsi emagetsi) vakave nenguva yakaipa. Ramba uchifunga kuti bhatiri rinoshandiswa redhiyo mune nhare rakaderera pane iro remamwe mabasa.
1 Yemahara software yedambudziko. Amateur uye nyanzvi zviteshi
1.1 Vhura sosi Hardware uye software yevaenzi veredhiyo
Yemahara software yedambudziko. Amateur uye nyanzvi zviteshi
Kunze kwekunge zvinhu zvanyanyisa kudzora, hazviite kuti denda razvino ritisiye tisina terevhizheni, tambo uye internet. Zvisinei, kutaurirana nenzira yemasaisai eredhiyo kuchiri kukosha kune mamwe marudzi ezve njodzi. Tinogona kusiyanisa marudzi maviri ezviteshi. amateurs uye nyanzvi.
Tinofanira kujekesa kuti iyo amateur chiteshi Haasi munhu ari kutamba radio mugaraji rake. Iri ibasa repasi rese rinotarisirwa nesangano reUnited Nations rakadaidzwa International Telecommunication Union. Vanofarira radio vanofanirwa kuwana rezinesi rinoratidza ruzivo rwavo rwehunyanzvi, uye vanoshanda mukati memitemo yakaoma.
Yemunharaunda uye epasi rese amateur radio network Vakaratidza kushanda kwavo nekuchengetedza kutaurirana kuvhurika kana dzimwe nzira dzakundikana.
Vhura sosi Hardware uye software yevaenzi veredhiyo
Imwe bhodhi makomputa senge Raspberry Pi, nekuda kwehukuru hwavo hudiki, mutengo wakaderera uye kuderera kwekushandisa, ivo vakanakira chiitiko ichi. kumwe kushandiswa kunogona kuve:
Kugadziriswa kwemadhijitari edhiyo redhiyo. Nokubatanidza inoenderana odhiyo kadhi uye nekuisa software inonzi FLDigi, zvinokwanisika kugamuchira uye kusarudza zviratidzo RTTY (radio teletype) PSK (phase shift modulation) uye CW (enderera wave) pakati pevamwe.
Kugamuchirwa kure: Mafungu eredhiyo anokwanisa kufamba chinhambwe. Izvo zvinokwanisika kumisikidza iyo Raspberry Pi pamwe neyakawedzera Hardware uye software inonzi SDR # yekugamuchira iwo ma siginari uye kuadzosera iwo kuburikidza newebhu.
WSPR inotumira: Iyo WSPR protocol ine iko kutapurirana nesoftware yeakaderera frequency masheni. Sezvo izvi zvichisanganisira nzvimbo yenzvimbo yemutepfenyuri, inogona kutora danho renzvimbo yevanhu vakakuvadzwa kana vakasungwa munjodzi.
Nzvimbo yekuwana: Kune akasiyana data mafaera ekuparadzira kuburikidza neredhiyo mafungu.
Position yekutevera uye yekufambisa system uchishandisa APRS: APRS inomirira Automatic Packet Reporting System. Kuishandisa zvinokwanisika kuona pamepu nzvimbo kunobva chiteshi cheredhiyo chakamisikidzwa kana nhare chinoshanda. Izvo zvinoitawo kuti zvive nyore kuwana ruzivo rwemamiriro ekunze, zvichiratidza pamepu yeese mamwe marudzi ezviitiko zvekufarira.
Kunyangwe isu tisina kutaura nezvazvo, Zvese izvi zviitiko zvinoda kuiswa kwemamwe ma module. Nekudaro, kune maredhiyo amateurs anotengesa iyo Raspberry Pi pamwechete nema module uye software inodikanwa
Ndakaedza kutora matanho ese kuitira kuti dudziro yangu yematemu ehunyanzvi ive yakajeka sezvinobvira, asi, zvinogona kunge kuti ndakanganisa. Kana paine chero maredhiyo amateurs muvateereri, fomu rekunyorera rinowanikwa rekugadzirisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Yemahara software yedambudziko. Mazuva redhiyo uye emergency
Edgar Fernandez akadaro
Chinyorwa chakanakisa, ndinokuunzira mamwe makomenti uye kujekeserwa sewairesi amateur kuti ini (LU7GAB rezinesi).
Kana kuri kudzima magetsi muArgentina musi wa16 / 06/2019 (Zuva rababa), kutanga, kutaurirana (neredhiyo) munharaunda paVHF bhendi nevamwe vaviri vandaishanda navo, ndaigona kuona kubva pazasi ruzha ruzha paHF kuti chimwe chinhu chaisave anga achiita mushe, that situation was not normal. Ini ndakakurumidza kuunganidza zvimwe zvinhu ndokuenda kukirabhu yedu yeredhiyo (LU4GF, http://www.qsl.net/lu4gf/) tichifungidzira kuti chinhu ichi chakakosha uye nzvimbo yekutaurirana yaidikanwa iyo yedu kirabhu redhiyo inogara iripo. Chokwadi, kwaive kudzima magetsi munyika uye mhedzisiro inofambiswa neradio radio ndeyekuti mwero weruzha rwemuchadenga unowanzogadzirwa nemidziyo yemagetsi yanhasi, kunyanya switching magetsi emagetsi nemwenje ye LED, inodonha zvakanyanya. Ndine mavhidhiyo akati wandei andakaita panguva iyoyo kuitira kana muchida humbowo. Neraki munharaunda medu makange musina zvekukurumidzira zvekutarisa.
Imwe yezano kune vaverengi ndeyekutsvaga uko kune iri padyo nhepfenyuro kirabhu kana redhiyo fan, ivo vanogona kutsvaga internet kana kungoona kune kune "zvisingawanzo antenna" (yakatwasuka antenna, ine marefu Yagi waya).
Kune rimwe divi, seGNU / Linux mushandisi ini ndine Raspberry mumusangano wangu uye sechikamu chezviitiko zvangu zvemumunda muredhiyo.
Pano ini ndoda kujekesa zvine chekuita "Mafungu eredhiyo anokwanisa kufamba chinhambwe." zvataurwa mutsamba, izvi zvinoenderana nekuti nderipi bhendi rinoshandiswa uye amateurs eredhiyo vanoziva izvo mushe: pamirefu mipfupi isu tinonyanya kushandisa iyo VHF bhendi, kune marefu marefu kufukidza nyika yatinoshandisa HF.
Kutaura nezve SDR kune nzvimbo dzeWebSDR (dzinoda internet), SDR tekinoroji (Software Yakatsanangurwa Radio) uye kune zvirongwa zvakawanda zvinoshandisa izvo (hapana chirongwa CHIMWE chinonzi SDR). Kune zvakare zvirongwa zvakawanda zve "digital modes" kuwedzera kune zvambotaurwa FLdigi.
Ini ndinofanirawo kusimbisa kuti ham radio inongoda "michina yekufambisa, bhatiri kana jenareta uye kanyanga yekutaurirana" (kana zvadzima magetsi), zvakare ne pc / notibhuku / rasipiberi tinogona kuendesa data nemifananidzo.
Ndinovimba zvataurwa zvangu zvinobatsira, chero chinhu chandinowanikwa kuti ndijekeswe, kunyangwe seGNU Linux mushandisi (ini ndinogara ndichiverenga zvinyorwa zvako :))
Pindura kuna Edgar Fernández
Ndatenda zvikuru nemhinduro dzenyu dzinonakidza.
Mune chimwe chezvinyorwa zvandakabvunza pachinyorwa icho software inonzi SDR # (SDR SHARP) inotaurwa uye izvi ndizvo zvandinoisa. Hechino chekuburitsa chinongedzo
WSL2 Yakagadzirira Mass Kugamuchirwa, Inowanikwa kune wese Munhu paWindows 10 v2004